Juventus oo xalay Baracelona ka cirib tirtay Champion League & Neymar oo oohin jabsaday-Sawiro | TOP NEWS
Juventus oo xalay Baracelona ka cirib tirtay Champion League & Neymar oo oohin jabsaday-Sawiro
Barcelona ayaa xalay awoodi weysay in markale ay soo laabasho cajiib ah sameeyso, markii ay barbaro 0-0 ah la dhaafi weeysay Juventus oo lugtii hore kusoo dubatay 3-0, waxaana sidaas afar dhamaadka Champion League ugu soo gudbay marwada duqda ah.
Juventus ayaa afar dhamaadka Champions Leaque-ga kula biirtay kooxaha Real Madrid, Atletico Madrid iyo AS Monaco waxayna Juventus si geesinimo leh uga soo badbaaday imtixaankii Camp Nou ee PSG ku hoobatay. Riyadii saddexda koob ee Balaugrana ayaa si rasmi ah u soo dhamaatay.
Barcelona ayaa haystay 90 daqiiqo oo kaliya oo dhinaca kale ugu dhigi kartay natiijadii 3:0 ahayd ee Juventus ka soo gaadhay kulankii lugtii hore laakiin tababare Allegri ayaa muujiyay geesinimo wuxuuna ku dhiiraday in uu la soo shirtago shax la mid ah shaxdii uu guusha ku soo gaadhay balse waxa kaliya ee uu sameeyay ayaa ahaa in uu qorshihiisa u badiyay difaacasho markasta oo ay Barcelona kubbada lugta ku hayso.
Barcelona ayaa markiiba hayd kooxda weerarka buuxa ku jirtay sidii la filayay laakiin qorshaha Juventus ayaa ahaa mid cajiib ah iyada oo difaacasho buuxda ku jirtay balse weerarka deg dega ah ee ay Cuadrado, Dybala iyo Mandzukic ay qaadayeen ayaa markale walwal ku hayay kooxda Luis Enrique.
Dhinaca kale Neymar ayaa oohin la baroortay ka dib markii Barcelona ay ka hartay tartanka Champions League markii ay barbaro goolal la’aan ah Camp Nou kula galeen Juventus iyadoo lugtii hore looga soo badiyay 3-0.
Saaxiibkiisii hore ee Barcelona Dani Alves iyo ciyaaryahanka reer Colombia Cuadrado ayaa sameeyay tilmaam ciyaar wanaagsan iyagoo isku dayay inay aamusiyaan oo ay sabarsiiyaan
Juventus oo xalay Baracelona ka cirib tirtay Champion League & Neymar oo oohin jabsaday-Sawiro added by Mohamed Abdulle Hassan on April 20, 2017